Cinammon 1.2 ayaa la heli karaa, oo leh qalab xafiisyo iyo wax badan | Laga soo bilaabo Linux
Cinammon 1.2 ayaa la heli karaa, oo leh qalab xafiisyo iyo kuwo kale oo dheeri ah
Qorfe, fargeeto ah GNOME Shell kuwa nostalgic u ah GNOME 2, ayaa gaadhay nooca 1.2, kaas oo loo arko inuu si buuxda u deggan yahay.
Nooca cusubi wuxuu keenayaa kuwo badan muuqaalada cusub, laakiin sidoo kale In la joojiyo a Qorfe xitaa ka badan GNOME Shell.
1 Qalabka xafiisyada
2 Qorshayaasha Desktop-ka horay loo qeexay
3 Habayn fudud
5 Hagaajinta liiska
6 Isbeddelada qaarkood daboolka hoostiisa
7 Ku rakibida
Qorfe 1.2 wuxuu dib u soo bandhigayaa saamaynta desktop iyo awoodda isticmaalehu u leeyahay inuu dejiyo animations-ka ama uu gabi ahaanba baabi'iyo. Tilmaamkan waxaa lagu daray kuwa isticmaala kuwa jecel saamaynta Compiz. Noocani waxaa lagu gartaa laba nooc oo loogu talagalay animation:
Fade, oo badalaya madadaalada daaqadaha
Miisaanka, kaas oo beddelaya cabirkiisa
Oo kudar 30 nooc oo kala guur ah.
Qorshayaasha Desktop-ka horay loo qeexay
In kasta oo walxaha desktop-ka (sida alwaaxyada) wali aan si xor ah loo dhaqaajin karin, Cinnamon 1.2 waxaan ku dooran karnaa 3 naqshadood oo horay loo sii qeexay oo loogu talagalay desktop-keena.
Iyada oo guddiga hoose (asalka).
Iyadoo guddiga korkiisa.
Labada dhinacba, sida Gnome-ka caadiga ah.
La-qabsashada qorfe ayaa hadda aad uga fudud. Maareeye doorbid ayaa lagu daraa taas oo xasuusinaysa Mozilla Firefox, halkaas oo aan ku leenahay ikhtiyaar kasta oo lagu abaabulo tabs. Sidaa darteed, way noo fududahay inaan bedelno mawduucyada, ku dabakhno saamaynta, ku darno tufaaxyada iyo kordhinta isla markaana aan u qaabeyno qaar ka mid ah goobaha desktop-ka.
Cinnamon 1.2 sidoo kale waxaa ku jira tufaax loogu talagalay desktop-ka. Ugu badnaan 5 ka mid ahi waxay yimaadaan:
Qalabka la saari karo
Kormeer (xakamaynta XrandR)
Liiska ugu muhiimsan si weyn ayaa loo hagaajiyay. Haddii aad wax raadiso, qaybaha ayaa noqonaya kuwo aan firfircooneyn, iyo adigoo si fudud u riixa [ENTER] raadinta ka dib, sheyga ugu horreeya ee natiijooyinka waa la fulin doonaa.
Isbeddelada qaarkood daboolka hoostiisa
Cinnamon hadda waxay isticmaashaa maareeyaha daaqadeeda, fargeeto ah Mutter oo loo yaqaan Muffin. Tani waxay ka dhigan tahay inaysan mar dambe taageerin mawduucyada Gnome Shell. Si kastaba ha noqotee, waa suurtagal in la qeexo qaababka mawduuc ee Gnome Shell iyo Cinnamon labadaba, oo laga dhigo mid la jaanqaadi kara labada desktops.
Waxa kale oo jira isbeddelo badan oo kale oo lagu arki karo qoraallada sii-deynta (Ingiriis).
Cinammon 1.2 iyo Muffin wali looma soo gudbin Ubuntu PPA. Si kastaba ha noqotee, xirmooyinka Cinnamon waa la soo dejin karaa, halka aan u baahan doonno inaan soo uruurino Muffin.
Isticmaalayaasha Linux Mint ayaa hubaal heli doona cusboonaysiinta u dhiganta maalmaha soo socda.
Xigasho: Cinammon & Laga soo bilaabo Linux
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Cinammon 1.2 ayaa la heli karaa, oo leh qalab xafiisyo iyo kuwo kale oo dheeri ah
Sawirka meeleynta Sebastian Varela dijo
Waxaan aad uga jeclaystay sida ugu fudud ee loo qaabeyn karo Qorfe, waxayna ubaahantahay tufaax badan Cinnamon ... Waxaan aaminsanahay in noocyada dambe ay ku dari doonaan tufaax dheeri ah iyo astaamo dheeri ah jawigan fargeeto Gnome Shell.
Jawaab Sebastian Varela
Haddii biraawsarka meeniska lagu dari karo Synapse ama uu lahaa ballaadhin si uu ula jaanqaado awoodiisa (ugu yaraan mid raadinta faylasha), Cinnamon wuxuu noqon lahaa Ilaah. 😀
xikmad badan dijo
Caan ka ahaanta fargeetadaani waa mid cajiib ah sidoo kale way wanaagsan tahay. Waxaan ku isticmaalaa OpenSUSE 12.1 oo si fiican ayuu u shaqeeyaa.
Qof walbaa wax fikrad ah kama haysto sida looga saaro liiska daaqadaha, si loogu isticmaalo dockbax ???
U jawaab adigu21
Ragga ku jira Linux Mint waxay sii kordhayaan kuwa raacsan. Fargeetadani waa mid aad iyo aad u wanaagsan.
Waan jeclahay, naqshadda Midnimada iyo Gnome 3 waan jeclaaday, laakiin waxa runtii ii xiisay waxay ahaayeen raadadkii hore, Cinammon wuxuu ila muuqdaa isku dhafka muuqaalka quruxda badan ee Gnome 3 iyo saameynta qurxoon ee Gnome 2, hadda kaliya waxaan ka heli doonaa deked wanaagsan oo aan dhigo (Xusuusin: Waa aragtida qof uun hadda ku dhajiyay Cinnamon markii ugu horreysay ubuntu)
Jawaab Felipe Lew Yee
Weli dareenkeyga ma qabato ama waxay noqon doontaa in KDE ay durbaba maskaxdayda ka tirtirtay gnome 🙂
KDE 4.8 waa la heli karaa!